Home Wararka Faroole oo ku eedeeyay Cumar C/rashid isku dir iyo ka been sheegid...
Faroole oo ku eedeeyay Cumar C/rashid isku dir iyo ka been sheegid heshiiska Boosaaso
Madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, ayaa sheegay inuu ka xun yahay in ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid uu khilaafay bayaankii ay ka soo saareen arrinta Boosaaso. Waxa uuna ku eedeyay Cumar CC inuu ka been sheegay wixii lagu heshiiyay, isla markaana aan hogaan lagu aamini karin.
Previous articleMaxaa xilka looga qaaday Guddoomiyaha Gobolka Bari?
Next articleDoor intee la eg ayay xaaskiisu ku lahayd hadalkii ka soo yeeray Maxamed Cabdirisaaq?
Madaxwayne K/X Carabeey” Dowlada qasab maaha in rabitaankeeda Lagu jaangooyo Masiirka...
Xildh. Ahmed Moallin Fiqi ” Qaran dumis iyo Amniga Qaranka uu...